Wiil kaalin muhiim ah u buuxiyay xulka qaranka Soomaaliya - BBC News Somali
Xasan Cabdullahi Haybe Soosaare, BBC Soomaali
Lahaanshaha sawirka SACIID
Image caption Bidix Axmed Cali Maxamed Kabtanka xulka qaranka iyo Siciid Cabdi Haybe oo dhinaca midigga xiga
Xulka qaranka Soomaaliya ayaa guul naadir ah ka gaaray isreebreebka loogu soo baxayo Koobka Adduunka. Waxay Soomaaliya 1-0 kaga badisay xulka Zimbabwe ka dib markii ay Jabuuti ku kulmeen.
Arrintan ayaa horseeday in la iswaydiiyo waxa xulka qaranka Soomaaliya iska badalay.
Dadaallada xulka qaranka ka muuqda waxaa ka mid ah in lagu xoojiyay dhallinyaro xirfad leh oo qurbaha ku nool, sida uu BBC-da u sheegay Siciid Cabdi Haybe oo xiriirka kubbadda cagta u qaabilsan soo arruurinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool.
Waa kuma Siciid Cabdi Haybe
"Waxaan ahaa qof mar walbe jecel ciyaaraha, kana qayb qaata ciyaaraha kubbada cagta, markaas ayaan jeclaystay in aan ka sameeyo waxbarasho heer jaamaceed ah si aan shaqsi ahaan horumar u gaaro, dhallinyarada Soomaaliyeedna u caawiyo". Ayuu yiri Siciid oo waraysi siiyay laanta Afka Soomaaliga ee BBC.
Siciid oo Britain ku noolaa ayaa sheegay in uu ku dhaqaaqay rabitaankiisa waxbarasho.
"Jaamacad ayaan billaabay waxaana bartay maamulka ciyaaraha iyo tababarka ciyaaraha, intaas ka dibna waxaan go'aansaday in aan matalo ciyaartoyda" ayuu yiri Siciid.
Go'aankaas ayaa u horseeday in uu aruuriyo oo dabo galo macluumaadka dhallinyarada Soomaalida ah ee qurbaha ka ciyaara.
Macallinka darawalnimada ee taariikhda la sameynaya xulka qaranka Soomaaliyakii
Soomaaliya oo guul taariikhi ah ka gaadhay ciyaar ka tirsan isreeb-reebka Koobka Adduunka
Intii uu macluumaadkaas arruurinayay ayayna u soo baxday in dhallinyarada Soomaaliyeed ee xirfadda leh ay u baahan yihiin qaran ay u dheelaan si dunida looga barto, qaranka Soomaaliyeedna uu u baahan yahay dhallinyarada xirfadda leh ee dunida kaga baahsan.
"Maalin aniga oo Holand jooga oo ciyaar fiirsanaya ayaan Oday Soomaali ah ku iri , dhallinyaradan qaran ayay u baahan yihiin, nasiib wanaag wuxuu igu yiri gudoomiyaha xiriirka kubbada cagta ayaan aqaannaa ee ma iskiin baraa, anigana haa ayaan ku iri,"
"Sidii ayuu isu kaana baray, ka dib gudoomiyaha ayaan kulannay waxaana u sheegay in aan ku shaqaysto matalaadda ciyaartoyda (agent) markii aan la wadaagay macluumaadka aan hayana wuu isoo dhaweeyay." Ayuu intaas ku daray.
"Gool hayaha marka laga reebo tobanka kalaba qurbaha ayaa laga soo aruuriyay" ayuu yiri Siciid.
Lahaanshaha sawirka XKC SOOMAALIYA
Image caption Xulka qaranka Soomaaliya
Xuseen Maxamed (Finland)
"Dhallinyaradan xirfaddoodu waa heer sare kooxo heerar kala duwan ka ciyaara ayayna ka tirsan yihiin, marka dhallinyaradu dhammaantood waxay diyaar u ahaayeen in ay calankooda iyo dalkooda matalaan". Ayuu intaas ku sii daray.
Algeria oo ku guulaysatay koobka qaramada qaaradda Afrika waxay ku faa'iiday dhallinyaradii dibadaha ka ciyaaraysay ayuu yiri Siciid oo xoojinaya faa'iidada qurbajoogta.
"Xulkii Algeria ee 23ka ka koobnaa hal mid oo kali ah ayaa ka dheelayay gudaha dalkooda." Ayuu intaas ku sii daray.
"Jabuuti si wanaagsan ayaa naloogu soo dhaweeyay, marti in aan nahayna ma aanan dareemin ee ciyaartoy dalkoodii ku dheelaya oo kale ayaan ahayn" ayuu intaas ku sii daray.